Eric Garcia oo Isbitaalka laga soo saaray kaddib dhaawicii halista ahaa ee xalay soo gaaray kulankii Man City iyo Arsenal – Gool FM
(London) 18 Juun 2020. Eric Garcia ayaa Isbitaalka ka soo baxay kaddib markii loola cararay xalay markii uu ku dhaawacmay kulankii dhexmaray kooxdiisa Manchester City iyo Arsenal.
Eric Garcia ayaa naqasku ku dhegan markii uu si xun ugu dhacay goolahayaha kooxdiisa ee Ederson, waxaana muddo daqiiqado ah uu yaalay cawska garoonka Etihad, halkaasoo markii dambe laga qaaday.
Daafacan da’da yar ayaa markii uu soo cafimaaday kaddib dhaawacaas ka soo gaaray kulankii ay 3-0 uga adkaadeen Arsenal, waxaa maanta oo Khamiis ah laga soo saaray Isbitaalka, iyadoo gurigiisa loo diray.
Garcia ayaa xalay oo dhan ku qaatay Isbitaalka, halkaasoo uu tijaabooyin caafimaad ku maray, waxaana markii dambe caddaatay inuu caafimaad qabo oo uusan dhaawac halis ah jirin, 19-sano jirkaan ayaana dib ugu soo laabtay isla maanta xarunta tababarka kubadda cagta Man City.
Goolhaye Ederson ayaa isaguna raali-gelin ka bixiyey shilkaasi uu isagu sababteeda lahaa, kaddib dhaawacii soo gaaray Garcia.
Pep Guardiola ayaysan u badnayn inuu da’yarkaan adeegsan doonin kulankooda soo aaddan oo ay la leeyihiin Burnley, waxaana uu doonayaa inuu nasiino fiican rabo.
Mesut Ozil oo jawaab lama filaan ah Twitter-kiisa kaga bixiyey in laga reebay gabi ahaan safkii kooxda Arsenal ee xalay guuldarrada kala soo laabtay Man City